Madheshvani : The voice of Madhesh - प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा महिला आउनुपर्छ : कृष्णा सिंह
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा महिला आउनुपर्छ : कृष्णा सिंह
कृष्णा सिंह, युवा नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
० प्रदेश २ कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । समुदायस्तरबाट कोरोना संक्रमितहरु फेला परिरहेका छन् । प्रदेश २ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार चुकेको हो कि संघले सहयोग गरेन ?
— प्रदेश २ मा पहिला अस्पतालहरुकै अवस्था एकदम दयनीय थियो । संघीय संरचनानुसार प्रदेश सरकारहरु गठन भएपछि प्रादेशिक अस्पताल भयो र कोरोना आइसकेपछि विभिन्न अस्पतालहरु गठन गरियो । यो महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्रीहरु ल्याएर पहिलेभन्दा अलिकति व्यवस्थित भएको छ । प्रदेश २ को जति जनसंख्या छ, खुल्ला सिमाना छ, त्योअनुसारको स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध हुनुपर्ने थियो त्यो छैन । क्वारेन्टाइनकै अवस्था राम्रो भइदिएको भए आज यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । अहिले पनि प्रदेश २ मा चाहिने जति स्वास्थ्य सामग्री छैन, ल्याबहरु छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । प्रदेश सरकारले पनि जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्न सकेको छैन । तर पहिलेभन्दा अहिले अस्पतालहरुमा धेरै सुधार आएको छ ।
० जसरी प्रदेश २ मा आठ वटा मात्रै जिल्ला छन् । प्रदेश सरकारको आधाभन्दा बढी बजेट गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको अवस्था छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा–एउटा ल्याब त राख्न सक्थ्यो नि ?
— तपाइँसँग सहमत छु, प्रदेश सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो तर गर्न सकेन । उहाँहरुको कमी कमजोरीहरु छन् । यदि प्रदेश सरकारले ल्याब ल्यायो भने पनि त्यसमा दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसका लागि संघबाट नै पठाउने हो । प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो पावर र पहुँचभन्दा बढी काम त गर्न सक्दैन । सामान खरिद गरेर वा टेण्डर गरेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पनि पु¥याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर प्रदेश सरकारबाट पनि कमी कमजोरीहरु भएको हो । यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच जुन समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने थियो त्यो पनि देखिएन । जब तीन तहको समन्वयात्मक भूमिका देखिँदैन भने कुनै एउटा मात्रै सरकारले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारबीच जुन सम्वादहीनताको अवस्था छ, यसले पनि अहिले मुलुकमा कोरोनाको भयावह स्थिति बन्दै गइरहेको छ । यसको मारमा जनता परिरहेका छन् ।
० प्रदेश २ को सरकारप्रति तपाइँकै पार्टीका सांसदहरुले धेरै गुनासाहरु गरेका छन् । यो सरकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मागहरु आएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— प्रदेश सरकारप्रति आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट गुनासो हुनु स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकारका सबै साथीहरु अहिले नयाँ नै हुनुहुन्छ । तर, सबभन्दा मुख्य कुरा टीम वर्क हुन्छ । उनीहरुबीच टीम वर्क हुन सकेन । पार्टीबाट चलेको भए सबै कुरा नियन्त्रित हुन्थ्यो तर व्यक्तिहरुले आफ्नो तरिकाले चलाएकोले असन्तुष्टिहरु छन् । मन्त्रीहरुले सांसदहरुसँग टीम वर्क गर्न नचाहने, एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । सबैले आआफ्नै तरिकाले बजेट बाँडफाँड गर्ने, मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई होच्याउने कामहरु भयो । त्यसैले राम्रो काम गर्नका जुन टीम वर्क देखिनुपर्ने थियो त्यो भएन । मन्त्रीहरुले कामै गरेन भन्ने छैन, तर सन्तोषजनक काम भएको छैन । विवादहरु बढी देखियो । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि मन्त्रीहरुलाई अलिकति गाह्रो भएको होला । उहाँहरुले समन्वयात्मक तरिकाले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो अवसर गुमाउनुभयो ।
० प्रदेश २ मा अहिले सरकारलाई निरन्तरता दिने कि परिवर्तन गर्ने ?
— यही सरकारलाई निरन्तरता दिने कुरा छैन, सरकार परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भइसकेको अवस्थामा अब संसदीय दलको चुनाव हुन्छ । संसदीय दलमा सर्वसहमतिले भयो भने सबभन्दा राम्रो, होइन प्रतिस्पर्धाको आधारमा जो संसदीय दलको नेता बन्छ उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यसैले प्रदेश २ मा प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलिसकेको छ, सबै लागिरहेका छन् । कसको नेतृत्वमा आगामी दिन राम्रो काम हुनसक्छ र कसलाई हाम्रा सांसदहरुले पठाउनु हुन्छ । त्यसमा निर्भर पर्छ । खासगरेर प्रदेश २ मा जसपाका सांसदहरुले भोटिङ्ग गर्ने हो । कुनै यस्तो अनुहार छ जसलाई सबैले स्वीकार गर्छ । त्यसैले प्रदेश २ मा संसदीय दलको चुनाव जसपाका लागि ठूलो चुनौती हो ।
० जसपाले अब बन्ने प्रदेश २ को सरकारमा महिलालाई मौका दिन सक्छ कि सक्दैन ?
— हामीले अनौपचारिक कुराहरु गरिरहेका छौं । यदि त्यस्तै नै धेरै विवाद आयो भने शहीद परिवारबाट पनि हामीले सांसद बनाएका छौं, शहीद परिवारबाटै मुख्यमन्त्री बनाइदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । शहीद परिवारबाट एक जना महिलाई मुख्यमन्त्री दिँदा केही फरक पर्दैन । यस्तो गरियो भने भोलीका दिन राम्रो सन्देश पनि जान्छ, शहीद परिवारप्रति सम्मान पनि हुनेछ । अर्को कुरा हामीसँग प्रदेश २ मा विभिन्न केन्द्रीयस्तरका महिला नेतृहरु पनि हुनुहुन्छ । हाम्रा पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रानी शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा सवल नेतृ हुनुहुन्छ । यस्तै, सुरिता साह हुनुहुन्छ, उहाँ सञ्चार राज्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । प्रदेश २ मा हाम्रा वरिष्ठ महिला नेतृत्वहरु पनि छन् । वास्तवमा महिलाहरुलाई प्रदेशमा विभेद गरिएको छ । तर आउने दिनमा यी विभेदहरुको अन्त्य हुनेछ । तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो पार्टीलाई महिलालाई अवसर नदिएको भन्दा पनि नपरेको हो । अब आउने दिनमा कम्तीमा महिलाई क्याबिनेट मिनिस्टर हुन्छ भन्ने आशा छ ।
० महिलालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन जसपालाई के अप्ठ्यारो छ त ?
— मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला नेतृत्वहरुले आफूलाई पहिला साबित गर्नुपर्छ कि म पनि मुख्यमन्त्रीलाई योग्य छु भनेर । रानी शर्मा, सुरिता साह लगायत अन्य महिला नेतृहरुले आफूलाई संसदीय दलका नेताका लागि म पनि योग्य छु भनेर आउनु त प¥यो नि । उहाँहरु पनि चुनाव जितेर नै अहिले सांसद बन्नुभएको छ । संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो पार्टीभित्र लड्नुपर्ने हुन्छ । हारजित आफ्नो ठाउँमा छ तर दाबेदारी त छोड्नु हुँदैन नि ।
० मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृहरु आफै अगाडि आउनुप¥यो ?
— जबसम्म आफै अगाडि बढ्दैन तबसम्म अरु कसैले तपाइँलाई त्यो ठाउँमा पु¥याइदिँदैन । महिला नेतृत्वहरु आफै अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । किनभने यसपटक स्पष्ट छ, पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व वा अध्यक्षद्वयले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । स्वतःस्फूर्त तरिकाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मुख्यमन्त्री छनोट हुन्छ । सकभर हाम्रा नेतृत्ववर्गले चाहन्छ कि सबै सांसदहरुबीच सहमति बनोस् यदि भएन भने प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश २ मा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुन्छ ।
० प्रदेश २ को सरकारमा रहेका अहिलेका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु जसरी आलोचित भइरहेका छन्, विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारमा उहाँहरु बदनाम भइरहेको छ । बाँकी कार्यकालका लागि पार्टीले नै महिलाई अवसर दिन किन अग्रसरता नदेखाउने त ?
— पार्टीले त सहयोग गर्न सबैका लागि तयार हुन्छ । पार्टीका लागि मो. लालबाबु राउत गद्दी, जितेन्द्र सोनल धेरै नजिक र महिला नेतृहरु टाढा भन्ने छैन । पार्टी आफैले कुनै व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदैन । मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृले पहिला आफू पनि योग्य हुँ भनेर अगाडि त बढ्नुप¥यो । प्रदेश २ का सांसदहरुमा महिला नेतृहरु कोही वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोही महासचिव, केन्द्रीयस्तरका नेतृहरु हुनुहुन्छ । महिला नेतृहरुको पनि प्रोटोकल उच्च नै छ, चुनावमा प्रत्यक्षरुपमा जितेर आउनुभएको छ भने दाबेदारी दिन किन न मिल्ने ? मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो समर्थक र प्रस्तावकसहित महिला नेतृ अगाडि त बढ्नुप¥यो कि अब प्रदेश हाँक्ने मौका दिनुस् । त्यसपछि हामी साथ दिन्छौं । जबसम्म उहाँहरुले इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्न तब हामीले मात्रै भनेर हुँदेन ।